पतिले बच्चाको नाम यस्तो राख्दा , पत्नीले मागिन् डिभो’र्स ! – Life Nepali
पतिले बच्चाको नाम यस्तो राख्दा , पत्नीले मागिन् डिभो’र्स !
काठमाडौं । एउटा बच्चा जन्मिने विषयमा आमाबाबु कति धेरै उत्साहित हुने गर्छन् । केहीले जन्मिनुभन्दा पहिला नै आफ्नो आगामी सन्तानको नामाकरण पनि गर्छन् । यद्यपि एक दम्पत्तीलाई भने यस किसिमको उत्साहले सम्बन्धवि’च्छेद नित्याएको छ । केही समयअघि मात्र यस्तो समाचार आएको हो । ७ महिनादेखि गर्भवती २३ वर्षीया महिला र उनका पतिको बीचमा यो स’मस्या देखिएको हो । उक्त दम्पत्तीको बीचमा पहिलो बच्चाको नामाकरणको विषयमा विवाद निस्किएको थियो । पतिले बच्चाको नाम आफ्नो मनपर्ने राख्नका लागि ढि’पी गरेका थिए ।
धेरै ढिपी गरेपछि अन्त्यमा पत्नीले पतिलाई नाम राख्ने दिने निर्णय गरेकी थिइन् तर, पतिले आफ्नी पूर्व प्रेमिकासँग मिल्ने नाम राखेका थिए । उनले आफू सबैभन्दा बढी माया आफ्नी पूर्वप्रेमिकालाई गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा उनीहरुको कुरा नमिलेसँगै उनीहरुको कुरा सम्बन्ध वि’च्छेदसम्म पुगेको छ । पतिले पूर्वप्रेमिकाको नाममा नै बच्चाको नाम राख्ने अ’डान कसेका छन् ।
Previous ‘म’ अपाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नि’यमित से*क्सको अनुभव लिइरहेकी छु !
Next शिक्षिकालाइ आठ कक्षा पढ्ने बिद्यार्थीले भ’गाएपछि !